सीईओलाई ४ घन्टा नियन्त्रणमा राख्न बाध्य पार्ने ६ बोतल रक्सी : एयरपोर्ट काण्डको कथा
8th November 2021, 04:51 pm | २२ कात्तिक २०७८
काठमाडौं : 'ब्याग स्विइङ गर्दा कर्मचारीलाई लागेको मात्र हो। मैले पिटेको छैन।'
सोमवार बिहान पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनन्जय रेग्मीले त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार जाँच-पासमा खटिएका नासुलाई कुटेको खबर बाहिरियो। उनले ती कर्मचारीलाई झापड हानेका थिए।
तर, सीईओ रेग्मीले भने नासुलाई कुटेको स्वीकार गरेका छैनन्। कर्मचारीले रोक्न खोज्दा बोकेको ब्याग बतासिएर लागेको दावी गर्दै आएका छन् उनले। तर, सीईओले कुटेको देख्ने धेरै कर्मचारी छन्। उनीहरुको दाबी रेग्मीको भन्दा ठीक विपरीत छ।
'उसले गालामा झापड हानेकै हो,' प्रत्यक्षदर्शी एक कर्मचारीले पहिलोपोस्टसँग भने।
रेग्मी लन्डनमा गत सोमवारदेखि भएको तीनदिने वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागी भएर शनिवार बिहान ९ बजे नेपाल फर्किएका थिए। मार्टमा नेपाली टोलीको नेतृत्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। फर्किँदा मन्त्री, सचिव विमानस्थलको भीआइपी लाउन्जबाट निस्किएका थिए भने रेग्मी अन्य यात्रु आउने ठाउँबाट जाँचपासमा आइपुगेका थिए।
उनी पनि भीआइपी लाउन्जबाट निस्कन सक्थे। तर, उनी सर्वसाधारण आउने कक्षबाट नै बाहिरिए। उनीसँग अन्य केही चिनजानेका मानिस भएको सीईओ रेग्मीको दाबी छ।
शनिवार भाइटीकाको दिन थियो। धेरै कर्मचारीको बिदा। तर, भन्सार जस्तो ठाउँमा सबैलाई बिदा दिन नमिल्ने। त्यसैले रोटेसन गरेर कर्मचरीको बिदा मिलाइएको थियो। अरुसँगै भन्सारका नायव सुब्बा सुमन थापा पनि ड्युटीमा खटिएका थिए।
मदिराले मातेको र साथमा ६ वटा रक्सीको बोतल देखेपछि उनले रेग्मीलाई रोके। कानुन अनुसार विदेशबाट फर्किनेले एक जनाले १ लिटर मदिरा ल्याउन पाउँछ। त्यसबाहेक भए व्यवसायिक हिसाबले भित्र्याउनुपर्छ। रेग्मीसँग तोकेभन्दा केही बढी परिमाणमा रक्सीको बोतल थियो। त्यसपछि कर्मचारीले सोधपुछ गरेका थिए। तर, नशामा रहेका रेग्मी दम्भका साथ प्रस्तुत भए र कर्मचारीको गालामा बजाए।
'मैले कुटेको होइन। सर्वसाधरण मानिसलाई कस्तो व्यवहार हुँदो रहेछ भनेर बुझेको हो। उनीहरुले मलाई रोक्न खोजेका थिए। त्यही क्रममा ब्याग सुइङ हुँदा लागेको हो,' सीईओ रेग्मीले पहिलोपोस्टसँग पटक पटक भने।
हात हालिसकेपछि विमानस्थलको माहोल एकाएक बिग्रियो। सबै कर्मचारीहरु एक ठाउँमा उभिए। होहल्ला नै भयो। सीईओ रेग्मीले विभिन्न मन्त्री र चिनेजानेका मानिसलाई फोन लगाउने प्रयास गरेका थिए रक्सी छुटाउन। तर, कसैको फोन नउठाएको पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा स्वीकारेका छन् उनले।
उनको व्यवहारले कर्मचारी असन्तुष्ट भइसकेका थिए। त्यसपछि उनीहरुले कर्मचरीलाई दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा कारबाही गर्ने माग उठ्यो। कर्मचारीमाथि भएको हातपातको विषय कर्मचारी संगठनहरुमा भुसको आगोको रुपमा फैलियो। त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईसम्म कुरो पुग्यो। भट्टराईले यो घटना भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटालाई ब्रिफ्रिङ गरे। कर्मचारीमाथि हातपातको विषयलाई 'जतिसुकै ठूलो मानिसले गरेको भए पनि' नछोड्न र कारवाही गर्न उनले प्रष्ट सिग्नल दिए। आफ्नो कर्मचारीको दुर्व्यवहार स्वीकार्ने कुरै थिएन।
त्यसपछि उनको मापसे चेक गर्ने निर्णय भयो। नजिकै सिनामंगलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उनलाई लगियो र जाँचियो मापसे। शंका सत्यमा बदलियो। रिपोर्ट - पोजेटिभ।
'डाक्टर भन्सारको सेटिङ छ जस्तो लाग्यो। केही टेष्ट नै नगरी मापसे देखाएको थियो,' सीईओ रेग्मीले आफ्नो बचाउका लागि हामीसँग भनेका छन्। विमानस्थलदेखि अस्पतालसम्म गर्दा चार घण्टा बितिसकेको थियो। त्यस अबधिमा सीईओ रेग्मीले धेरै कसरत गरे तर कुनै उपाय लागेन। त्यसपछि उनले बाध्य भएर जरिवानमा तिर्नुपर्‍यो।
उनीसँग रहेको रक्सीका बोतल जफत भयो। कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको हर्जाना तिर्नुपर्‍यो पाँच हजार रुपैयाँ। यदी उनले गल्ती नगरेको भए जरिवाना रकम तिर्न प्रष्ट इन्कार गर्न सक्थे। हातपात गरेको विषयमा उनले जरिवाना रकम तिरेका छन्। ल्याएको मदिरा जफत भएपछि उनीमाथि अरु कारवाही हुने आधार थिएन।
हामीले नगरेको अपराधका लागि जरिवाना किन तिरेको त? सीईओ रेग्मीलाई हामीले सोध्यौं। उनले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्। 'कति अलमल गर्नु? टीका घरमा लगाउने समय भएको र जरिवनामा पनि सरकारी ढुकुटीमा जाने भएकाले' रकम तिरेको जवाफ दिए उनले।
घटना भएको दुई दिनपछि मात्रै एयरपोर्टको प्रकरण बाहिर आयो। खबर मन्त्रालयसम्म पुग्यो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री प्रेम आलेले उनलाई सोमवार दिउँसो बोलाएर सोधपुछ गरे।
'गल्ती देखिए कारबाही हुन्छ। कुनै दवाब प्रभावबाट कोही उम्किन पाउँदैन,' मन्त्री आलेले पहिलोपोस्टसँग भनेका थिए।
मन्त्रालयलाई सीईओ रेग्मीको घटना बाहिरिएपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने दवाव बढेको छ। रेग्मी प्रकरण सजिलै पहिचान गर्न सकिने विषय हो। घटनाको अनुसन्धान गर्न कुनै जटिलता छैन। घटना कुनै सुनसान ठाउँमा भएको पनि होइन। प्रत्यक्षदर्शी पर्याप्त छन्। उनीहरुको कुरा सुन्दा सबै प्रष्ट हुन्छ।
तोकेभन्दा बढी रक्सी ल्याउन नपाउँदा कर्मचारी कुट्ने पर्यटन बोर्डका सीईओलाई मन्त्रीले डाके, रेग्मी भन्छन् : मलाई फसाइयो
पर्यटन बोर्डका सीइओ रेग्मीले ६ बोतल रक्सी नछुटाएको भन्दै भन्सारका कर्मचारी कुटे
एयरपोर्टको काण्डबारे सीईओ रेग्मीको मन्त्री आलेलाई ब्रिफिङ